GR Super Sport Concept ကို Tokyo Auto Salon 2018 မှာကျင်းပသွားမယ့် Toyota GAZOO Racing! – AutoMyanmar
GR Super Sport Concept ကို Tokyo Auto Salon 2018 မှာကျင်းပသွားမယ့် Toyota GAZOO Racing!
Toyota Gazoo Racing ဟာ GR Super Sport Concept ကိုတော့ Tokyo Auto Salon 2018 ပွဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ Makuhari Messe ဖြစ်ပြီး ကျင်းပမယ့်ရက်ကတော့ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ကနေ ၁၄ အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ Makuhari Messe ဆိုတာကတော့ ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့ Detail ကျကျသိချင်ရင်တော့ အောက်ပါ Link ကနေစုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Toyota Gazoo Racing ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကားပြိုင်ပွဲတွေအတွက် အဆင်ပြေပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကားတွေကိုဖန်တီးသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းကမ္ဘာကျော်ကားပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ The World Rally Championship (WRC), World Endurance Championship (WEC) အစရှိတဲ့ကားပြိုင်ပွဲတွေကိုဆိုလိုတာပါ။
The Yaris WRC, TS050 Hybrid, 86 GR, The Vitz GRMIN,a150-unit limited edition model အစရှိတာတွေကို GR Super Sport Concept မှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ မထွက်ရှိသေးတဲ့ကား model တွေသာမက ထွက်ရှိပြီးသားကား model တွေကိုပါမြင်တွေ့ရမှာကြောင့်လက်လွတ်မခံသင့်တယ့်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
GR Super Sport Concept ကိုတွေ့မြင်ရမှာကတော့ Nürburgring ကားပြိုင် ပတ်လမ်းကြီးမှာဖြစ်ပြီး အပတ်၁၀၀ (သို့) ၁၀၀ ကျော် ကို ၂၄ နာရီအတွင်းပြီးမြောက်အောင်မောင်းနှင်ရမှာပါ။ Concept မှာပါဝင်မယ့်ကားတွေက ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ model အလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကားပြိုင်ရမယ့် လူတွေကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့မှကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
今年のテーマソングは湘南乃風の『Be Strong』。開幕まであと23日です！ #TAS2018
— TOKYO AUTO SALON (@tokyoautosalon) December 20, 2017
Motor Show and Event, Toyota